သင်က မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူတစ်ယောက်လား? - Chit MayMay
Home Parenting Parent Guide သင်က မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူတစ်ယောက်လား?
သင်က မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူတစ်ယောက်လား?
သင်ဟာ မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူတစ်ယောက်လား? “မဖြစ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါက အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ငါပြပါရစေ”, “အဲ့အလုပ်နဲ့ သမီးပုံစံနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား”…စသဖြင့် သင့်သားသမီးတွေကို ဒီလိုမျိုး ပြောဖူးပါသလား? ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေနဲ့ ကျွန်မတို့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လူငယ်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အညွန့်ချိုးမိတတ်တယ်။ အိပ်မက်တွေကို သတ်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကလေးတွေကို သတိရှိရှိ ရှင်သန်စေချင်တယ် မဟုတ်ပါလား? “Shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars” ဆိုတဲ့ ရှေးဆိုရိုးစကားအတိုင်း ကျွန်မတို့ဟာ ပန်းတိုင်ကို မြင့်မြင့်ထားသင့်ပါတယ်၊ အကောင်းဆုံးအရာကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရည်မှန်းပြီး အောင်မြင်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားရပါမယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ ကျရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ကလေးတွေကို အောက်ခြေမလွတ်အောင် ထိန်းသိမ်းရင်း ရည်မှန်းချက်တွေ မြင့်မားစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို လက်တွေ့ကျကျ အားပေးပါ။ ပြီးတော့ သင်ဟာ မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူ(dream killer) တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒီလက္ခဏာ (၅)ချက်ရှိနေသလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
၁။ သင်ဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အမေတစ်ယောက်ပါ
သင်ဟာ ကလေးက အကြံဉာဏ်တစ်ခု၊ ပန်းတိုင်တစ်ခု (သို့) အစီအစဉ်တစ်ခု ပေါ်လာတာနှင့် အလုပ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအားလုံးကို ချက်ချင်းစပြီး ထောက်ပြတတ်ပါတယ်။ မလုပ်မဖြစ်တဲ့အရာကို တည့်တည့်သွားမယ့်အစား သူတို့ရဲ့အိပ်မက်အတွက် ကောင်းတဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ သူတို့ အစီအစဉ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေဆီကို သင်ဆက်သွားချင်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင် ကူညီပေးဖို့ သူတို့ကို မေးခွန်းတွေမေးပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေကို ဘေးကင်းစေချင်ကြသလို သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို တွေးစေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေလှိုင်းစီးဖို့ သင်ယူရင်း တစ်နှစ်မှာ လူဘယ်နှယောက်သေလဲ မင်းသိလားဆိုတဲ့ ပြောပုံမျိုးက သင့်ကလေးတွေကို ကြောက်လန့်တတ်တဲ့ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- သင့်ရဲ့ကလေးက အားကစားအသစ်ကို စမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် သင်ဟာ အဲ့ဒီအားကစားလုပ်နည်းတွေ You Tube ဗီဒီယိုတွေကနေ ရှာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်တွေ ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ သင်က သူတို့အတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်တစ်ခုထဲကို တွန်းပို့လိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့ဟာ ပျော်စရာတွေ အကုန်လုံး စုပ်ယူခံခဲ့ရ၊ လွှမ်းမိုးခံရသလို ခံစားရတာကြောင့် သူတို့ရဲ့အိပ်မက်က သေသွားပါပြီ။ ပြီးတော့ သင်ဟာ Stage Mom တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။
၄။ နာကျင်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်
ကျွန်မအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ညီမကို အရမ်းကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ကျောင်းမှာ တစ်ခုခု စမ်းကြည့်ချင်ရင် သူ မလုပ်နိုင်မှာကို ကျွန်မကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မက သူ့ကို စိတ်မချမ်းမသာ မဖြစ်စေချင်တာကြောင့် မလုပ်ကြည့်ဖြစ်အောင် သူ့ကို စိတ်ဓါတ်ကျစေခဲ့မှာပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာက သူဟာ ကျွန်မရဲ့mother hen (အလွန်အကျွံ အကာအကွယ်ပေးသော မိခင်သဘောထားရှိသူ) သဘောထားကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ကောင်းစွာ ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ မိခင်တွေအနေဖြင့် ကျွန်မတို့ဟာ သားသမီးတွေအား ကျရှုံးမှုဝေဒနာကို ကြံ့ကြံ့မခံစေချင်ကြပေမယ့် သူတို့အား ကြိုးစားခွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူနိုင်ပြီး သင်ခန်းစာတွေထဲကနေ ခွန်အားတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅။ ရွေးချယ်စရာတွေ မပေးတာ
Ramona the Pest ကို ရေးသားသူ Beverly Cleary မှာ dream killer မဟုတ်တဲ့ မိခင်တစ်ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ Beverly ကသူ့အမေကို စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ကြောင်း ပြောတဲ့အခါ သူ့အမေက” မင်းစာရေးဆရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်”, “ဒါပေမယ့် မင်းအလုပ်ရနိုင်မယ့် ဘွဲ့တစ်ခုခုကို အရင်ရဖို့လိုတယ်”လို့ပြောပါတယ်။ Beverly ဟာ စာကြည့်တိုက်သိပ္ပံနဲ့ ဘွဲ့ရရှိပြီး ညဘက်မှာ စာရေးဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မိခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Previous articleမိခင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့ ဆရာအတတ်ပညာ (၅)ခု
Next articleဒီနေ့ခေတ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်နေပြီဖြစ်သော လွဲမှားနေတဲ့ ရှေးခေတ်ပျိုးထောင်နည်းများ